Uyifaka njani i-Android 9.0 Pie beta phantsi kwe-MIUI 10 kwiPocophone F1 | I-Androidsis
UAron Rivas | | Tutorials, Xiaomi
Xiaomi Ibonakaliswe njengenye yeempawu ezibonisa inkxalabo enkulu malunga nokubonelela ngohlaziyo kwiifowuni zabo. Asinakukuthetha oku kwabanye abaqhele ukulibaziseka xa kufikwa ekunikezeleni inguqulelo ye-Android ehambele phambili kwizixhobo eziyifaneleyo ngenxa yeenkcukacha zazo ezilungileyo zobuchwephesha.
Isicwangciso esitsha sikaXiaomi sokuphehlelela iifowuni ezingabizi kakhulu phantsi kwegama elitsha lophawu iPocophone isebenze kwinkampani ukusukela oko uPoco F1 ifumene ulwamkelo olukhulu eIndiya. Ifowuni yaphehlelelwa ngenkqubo yokusebenza ye-Android 8.1 Oreo phantsi kwe-MIUI 9.6 kwaye ngoku yenye yeefowuni zokuqala ezivela kwibrendi ukufumana uhlaziyo kwi-Android 9 Pie kunye neMIUI 10. Apha ngezantsi, Sichaza into ekufuneka uyenzile ukuyifumana kwiselfowuni kwinguqulelo yayo ye-beta, yeyiphi ekhoyo.
Kwinyanga ephelileyo, uXiaomi ukhuphe i-MIUI yokuqala ye-10 ye-Beta ROM esekwe kwi-Android 8.1 Oreo yePocophone F1. Ngoku iqela le XDA Developers Ufumene ingxelo yokuqala ye-beta yehlabathi jikelele ye-MIUI 10 ene-Android 9 Pie yePocophone F1. UXiaomi akakaqinisekisi ngokufika kwale nguqulo ye-beta, kodwa ngokucacileyo yile nto.
Njengoko ubona kumfanekiso ongentla, IXiaomi Pocophone F1 iqhuba i-Android 9 kunye ne-MIUI 10 Global 8.10.30 beta. Ikwabandakanya indawo efanelekileyo yokhuseleko lwe-Okthobha yenyanga ka-Okthobha, apho imisebenzi ethile izinzileyo kwaye ezinye iincukuthu ezincinci zilungiswa. Ewe kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukuba ayisiyiyo ingxelo ezinzileyo, ke inokubonisa ezinye bugs.
1 Uyifaka njani i-Android 9.0 Pie beta phantsi kwe-MIUI 10 kwiPocophone F1
2 I-Pocophone F1, isiphelo esiphezulu esingenamona
I-ROM entsha inokuba njalo fakela nge-MIUI Updater app. Ukwenza njalo, kufuneka umntu akhuphele iROM esi sixhobo kwaye emva koko wenze ifolda entsha enegama khuphela_okukhuphela kwiPoco F1. Emva koko iROM ekhutshelweyo kufuneka idluliselwe kwifolda eyenziweyo kwaye emva koko ixhase iifayile kunye neefolda ezibalulekileyo kwisixhobo.
Ukufaka uhlobo lwe-beta ye-MIUI 10 esekwe kwi-Android 9 Pie, abasebenzisi bePoco F1 kufuneka bahambe Cwangcisa > Malunga nefowuni > Ukuhlaziywa komsebenzi > Khetha iphakheji yokuphucula emva koko uye kwifolda apho ikhoyo ifayile yokuhlaziya ye-MIUI 10 kwaye emva koko ukhethe. Inkqubo yokuhlaziya ye-MIUI 10 iya kuqhubeka iyodwa kwaye ingathatha imizuzu engama-30 ukuyifaka, ke kuya kufuneka ulayishe i-terminal ngokufanelekileyo.
Iposti iqhubeke yathi ukufuduka kwe-MIUI 9 Global Stable kwinguqulelo entsha ye-beta kuya kubangela ukulahleka kwedatha. Ke ngoko, siyayiphinda loo nto kuyacetyiswa ukuba ubuyise idatha yakho ngaphambi kokufaka isoftware entsha.
Umenzi waseTshayina uthembise oko IPoco F1 iya kusikelelwa ngohlaziyo lwe-Android Q ngo-2019. Ukongeza, ifowuni kulindeleke ukuba ifumane uhlaziyo kungekudala ibonelela ngenkxaso yeWidevine L1 kwimixholo ye-Netflix HD yokusasaza kunye neevidiyo zeAmazon Prime.
I-Pocophone F1, isiphelo esiphezulu esingenamona
Ngakolunye uhlangothi, Ukuphononongwa kancinci kweempawu kunye neenkcukacha zobuchwephesha zeXiaomi Poco F1, sikhubekile kwiscreen se-IPS LCD esinga-6.26-intshi esixhasa i-18.7: 9 umlinganiso wezinto kunye nesisombululo se-FHD + sama-pixels angama-2.246 x 1.080. Ngaphakathi, iqonga leQualcomm elihambele phambili kakhulu, iSpapdragon 845, ixhasa onke amandla anokufikelelwa sesi sixhobo.
Kwelinye icala, inotshi ye-smartphone igcina i-megapixel engama-20 yekhamera yangaphambili kunye ne-IR sensor yokuvula ubuso, esele sikuchazile yona uyisebenzisa kanjani ukuthatha iifoto. Kwakhona, Iphaneli yangemva yefowuni ixhotywe nge-12 kunye ne-5 megapixel yokuseta ikhamera ezimbini, iza nebhetri yomthamo we-4.000 mAh kwaye ixhasa ukutshaja kwe-18 W ngezibuko le-USB-C. Inayo nekhadi le-microSD slot kunye nesikena seminwe, kunye ne-RAM ye-6 okanye ye-8 GB.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyifaka njani i-Android 9.0 Pie beta phantsi kwe-MIUI 10 kwiPocophone F1